ယွၩဒဲမၫမၧၫ့အဆၧမၩ. | Radio Veritas Asia
ကဆါနံၫဂၩအဆၧမၩနီၪ, ၦမၩၥ့ၪနးဂၩအ့ၬ. အဂဲးဘဲၫယီၩ မိအဲၪဝ့ၫနးဂၩတၭ, မိၥၭဂဲၫ့ဝ့ၫနးဂၩလီၫ. အ့ၪလမွဲဘၪတၭ, မိဖီၪ့ထၬၦနးဂၩတၭ, မိမၩကြၩ့ထမးဝ့ၫနးဂၩလီၫ. ယွၩအဆၧမၩ, ဒဲမၫမၧၫ့အဆၧ မၩနီၪနၥံၪမၩၥ့ၪအ့ၬ.
မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, ယစံၭနၥံၪ, မွဲပမိအၪ့ဘၪဘဲၫၥ့ၪလဲၪ, မွဲပမိအီၩဘၪဘဲၫၥ့ၪလဲၪနီၪ, ထီးအၪ့ယိၪလၩ့ လၧနၥံၪအၥၭမၧၫ့အဂးလဂ့ၩ, မွဲပမိကီၩ့ဘၪပမိၥိၭ ဘၪဘဲၫၥ့ၪလဲၪဘဲၫၥ့ၪလဲၪနီၪ, ထီးအၪ့ယိၪလၩ့ လၧနၥံၪအနၫ့ဆါအဂးလဂ့ၩ. ပၥၭယီၩ, ဂ့ၩနဲၪ့ဆၧအၪ့ဆၧ အီၩတၭ, ပနၫ့ဆါယီၩ ဂ့ၩနဲၪ့ဆၧကီၩ့ဆၧၥိၭနီၪ, မွဲအ့ၬဧၪ.-
ယိဆီၫ့မီၪ့ခွါထိၪၥံၪလံၪၥံၪ လၧဆၧဖိၭဖၫ့နီၪဆံၭ. အဂဲးဘဲၫယီၩအဝ့ၫၥံၪလဎွံၪဘၪဆၧ, လကူၭ ဘၪဆၧ, အီၪက့ၪကီၪ့ဆၧလၧဖၫ့ဖၧၩ့အ့ၬ. မွဲလါနၫ့ဘိၩနၥံၪအဖါအီၪလၧမူၭခိၪနီၪ လုအၪ့လုအီၩအဝ့ၫၥံၪ လီၫ. နၥံၪဝ့ၫဒၪယီၩ, နၥံၪဂ့ၩနဲၪ့အဝ့ၫၥံၪဒိၪဒၪအဆၧဒံၭ, မွဲအ့ၬဧၪ.- မွဲပလၫလၧနၥံၪအကျၩလၧအအၪ့ ယိၪဆၧအကၠီၩ့နီၪ, ထုၭထီၫထၪ့အယုၬနးဖျါနီၪ မိၥ့ၪလဂၩလဲၪ.- မွဲဘၪနီၪနၥံၪအၪ့ယိဆၧလၧနၥံၪအ ကီၩ့အၥိၭအဂးလဲၪ.
ဆၧလၧဖီၫယၫအီၪ လၧဆၧပျၩ့ဖၧၩ့နီၪ, မွဲအဒိၪထၪ့ဝ့ၫ ဘဲၫၥ့ၪလဲၪဘဲၫၥ့ၪလဲၪနီၪ ဆီၫ့မီၪ့ခွါဘီၪ. အဝ့ၫၥံၪလမၩဘၪဆၧ, လဝံၭဘၪဆၧတၭ, မွဲလါနၫ့ဘိၩ, ယလီၩဘၪနၥံၪယီၩ စစီလမၧၫ့ဒၪလ့ၬအီၪလၧအကယးကဖး ထီးအလူၬလဂၩနီၪ, ကီၩ့ၥိၭဝ့ၫထီၩ့ဖီၫလမုနီၪအ့ၬ.- နၥံၪနဲၩဆၧၡၩၥံၪဧ့, ယွၩအ့ၪဒုၭကီၩ့ဒုၭၥိၭ နၪ့လၧဆၧပျၩ့ဖၧၩ့ လၧလနံၩယီၩအီၪဝ့ၫ, အ့ၪမွဲကဲဂီၩခိၬလနံၩ ဘၪဆၧဖျႃၭလၩ့ဝ့ၫ လၧဖံၫ့ချၪဖၧၩ့တၭ, မိဒုၭကီၩ့ဒုၭၥိၭနၥံၪအၪနဲၪ့အနီၪဒံၭ, မွဲအ့ၬဧၪ.-
မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, မွဲပမိအၪ့ဘၪ, မွဲပမိအီၩဘၪ, မွဲပမိကီၩ့မိၥိၭဘၪ ဘဲၫၥ့ၪလဲၪဘဲၫၥ့ၪလဲၪနီၪ, ထီးစံၭဆၧနီၪဒဲအၪ့ယိၪဆၧလဂ့ၩ.- အဂဲးဘဲၫယီၩ ဆၧနီၪလဖၪထီးအလူၬ ၦဆၨၩၥံၪအၪ့ဎၬဝ့ၫဒၪ လီၫ. အ့ၪမွဲနၥံၪဝ့ၫဒၪယီၩ နၥံၪဂ့ၩန့ဘၪဆၧလဖၪနီၪ, နၥံၪအဖါအီၪလၧမူၭခိၪၥ့ၪယၫလၧအလးအီၪဝ့ၫလီၫ.- အ့ၪမွဲအၪ့ဎၬဆိၫ ယွၩအဘၩ့အမုး ဒဲအဆၧတီၩဆၧလီၩ့ဆံၭ. ဆၧမိဖ့ၪလၫ့နၥံၪလၧဆၧလဖၪနီၪ ထီးအလူၬလၧအဖၫ့ခိၪလီၫ.- မၩအၥၭဘဲၫနီၪ တၭ, ထီးအၪ့ယိၪဆၧ လၧကဲဂီၩခိၬအဂးလဂ့ၩ, ကဲ ဂီၩခိၬနီၪ မိအၪ့ယိၪဆၧလၧ အဂးဒၪဝ့ၫလီၫ. မုလနံၩအဆၧအၧၩ့ဆၧနၭနီၪအၪယူၭ လၧအဂးဒၪဝ့ၫလီၫ.